DOWNLOAD third-21MF FSX & P3D - Rikoooo
Munyori: Ivan Jurcaga - Peter Priskin - Kendy Schwarz http://migsim.ic.cz
wedzera-mberi Uyu vaya vanoda Hardcore simulation, airevei kuti haugoni kutanga injini asina kutanga kuverenga uye vainzwisisa Chinyorwa. Hatingadi hedu kukopa kana usiri kuda mari kunzwisisa ainoita. Maitirwo ezvinhu uye rakapotsa Cockpit zvinhu akafanana nevaya chaicho third-21 MF. rongedza Izvi zvinosanganisira mitinhimira 100% chaiyo, zvakawanda repaints uye wakanaka VC. Muenzaniso kwokunze riri kuitwa zvakanaka zvikuru. Nokuti FSX-SP2 kana Yechipiri.
Nokuti zvinokubatai-kure zvinokurudzirwa kuti munhu azvipire kurova-rova uye kunonyanyisa Trim.
The Chinyorwa akabatanidza rongedza ichi ari Czech Zvisinei, Rikoooo yakazviwanira rakashandurwa chimwe Lukasz Kacprzykowski. Download pazasi
The Mikoyan-Gurevich third-21 ari Soviet Ndege yehondo aizivikanwa nokuda NATO romutemo Fishbed. Ndiyo ndege zvinobikwa nguva dzose, pamwe pamusoro 11,000 makopi.
simba chaizvo uye zvatinogadzira hazvigoni kunyatsotevedzera zvinoita kuti third-21 Zvisinei kwete chaizvo refu muhondo uye zvemagetsi zvinobatsira kuti navigation, zvichiita kuti "ndege mutyairi", migumisiro kuvimba zvikuru muhondo unyanzvi wevakabhuroka. Pasinei utera zvayo, zviri dzakakurumbira chaizvo: yayo huri pasi mutengo kwakagonesa mauto akawanda mhepo kuti avo supersonic murwi wokutanga.
Mharidzo Vhidhiyo kubva Fox 4 nhengo Rikoooo
Tanga kumusoro nzira
Basic zvinobhururuka zvesangano
Amateur vhidhiyo kutanga kukwira injini uye Air Show (chaiwo)
Video: 10 kwemaminitsi happyness (chaihwo)
Third-21MF FSX & P3D Download
Downloads: 9 514
Downloads: 78 919
Downloads: 33 720